Mmekọahụ-Ịhụnanya-Ndụ | Ka 2022
Njikwa Gburugburu Ebe Obibi
Arụmụka ahụ kpalitere ụfọdụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ọsọ
2022 | ẸNam Ekese Paul Adams | Atiya: Mmekọahụ-Ịhụnanya-Ndụ
Maka arụmụka onye isi ala ikpeazụ, ndị mmadụ tụgharịrị na Craigslist ịhazi nnọkọ mkparịta ụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
16 Mmekọahụ, Ọrụ aghụghọ nke ịrafu
Chọrọ ndụmọdụ gbasara mmekọahụ? Gbalịa mee ihe iri na isii a nke ịkwa iko, iberibe.
Ihe kpatara o ji dị mma ịnọ n'alụghị di n'oge ọkọchị
Ee, di na nwunye na -ejide aka, na -achọgharị n'akụkụ ụzọ n'oge ọkọchị mara mma.
Ememe ncheta afọ ... Mgbe Ichetara ya
M tetara n'ụtụtụ Satọdee na ihe mgbu. Ekpebiri m itinye otu mkpebi nke afọ ọhụrụ m n'ọrụ, ya bụ, ịpụ karịa nwa ọhụrụ, ya na ndị okenye na ikekwe ọbụna nwata nwoke ... nwoke, m na -ekwu ... n'oge ụfọdụ. Akpọrọ m ka m mee nkwalite na GF Carlo nwere obi ụtọ ịbịa wee jiri obere nwa osisi ya pụta-wee chịkọta tebụl ụgbọ oloko kwuru na etisasịwo nwa osisi maka ... fun. Grrr. JD, n'ezie, ụzọ ụgbọ oloko anaghị abanye n'ime ụlọ ịsa ahụ na ụgbọ oloko anaghị abanye na ndị na -agba m akpụkpọ ụkwụ, na obere osisi ikuku anaghị abanye na slits na radiator. Mgbe m jere ichu nta na apt, enwere m obi ụtọ ịpụ ruo awa ole na ole.
Kedu ihe ọ dị ka gị na nwa agbọghọ na -ehi ụra. Nwa agbọghọ Guy.
Enweela m ọtụtụ ihe gbasara ndụ mmekọahụ ebe a na Smitten. Ee, ezinụlọ m na -agụ akwụkwọ m niile. Mana enwere ihe ole na ole m nwere ịkọrọ gị. Ka anyị bido enyi nwoke mụ na ya kpara ogologo oge gara aga.
Ebumnuche 4 ziri ezi ka ị ghara izipu kaadị ezumike
Ana m ezipụ kaadị ememme oge ezumike ọ bụla. Mana afọ a, m dara ụdị bọọlụ ahụ. Ebumnuche m bụ ka m zipụ ha ka ha bịarute n'ihu Hanukkah, mana ebe m ka ga -azụrịrị kaadị nke doro anya na ọ gaghị eme. Ị na -ezipụ kaadị ezumike?
Ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na ị kwaa ụta maka ịgbasa, dị ka onye na -ahụ maka akwara ozi kwuru
Na kọlụm mmekọahụ Glamour, Jụọ Dr. Nan, onye na -ahụ maka mmekọrịta nwoke na nwanyị tụgharịrị na neuroscientist na -aza ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na ị kwaa ụta maka ịgbasa.
Azịza 9 maka ajụjụ gbasara mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị
Ọtụtụ afọ gara aga, anọghị m na mmekọrịta jọgburu onwe ya, enweghịkwa m mmasị ịlụ ọzọ. Ndị enyi m niile nwere obi ụtọ maka oge enyi m nwoke. Ọ ga -amasị m inwe nnwere onwe na -atọ ụtọ - enwere m ike ịmụta ka esi ese ma ọ bụ yiri uwe ogologo ọkpa yoga ogologo izu ụka niile ma ọ bụrụ na m chọrọ. Nke kachasị mma, enwere narị narị saịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị na -eche ka m banye. Enwere naanị otu nsogbu: Achọghị m ịtụba onwe m ọzọ n'ime ọdọ mmiri mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ọ na -agwụ ike ma na -akụdakarị mmụọ. Otu nwoke mara mma ga -ezitere m ozi. Anyị ga -ezukọ ma emechaa n'ụbọchị ahụ, mgbe m ga -achọpụta na ọ (a) sentimita ise dị mkpụmkpụ karịa ka ọ depụtara na profaịlụ ya; (b) 'onye na-atọ ụtọ' na achọghị ọrụ; (c) ka nọ n'ụdị mmekọrịta; (d) ikekwe onye na -egbu ọchụ; (e) ihe niile dị n'elu. Enweghị m mmasị izute ọtụtụ ụmụ nwoke na -alụbeghị di. Naanị m chọrọ ịchọta nwoke kwesịrị ekwesị, onye zuru oke maka m. N'etiti oge m malitere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị na ugbu a, achọpụtala m kpọmkwem ka weebụsaịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị si arụ ọrụ. Achọpụtala m ma nyochaa data, agwa ndị sayensị kọmputa okwu, wee chọpụta ihe na -eme ụfọdụ profaịlụ nke ọma. Ọbụna edere m
Ụzọ 7 ka ị ghara ịbụ di na nwunye ọhụrụ ahụ na -akpasu iwe
Ị malitere ịlụ onye ọhụrụ. O zuru oke: ị na -ahụ ihe niile ọ na -eme ga -atọ ya ụtọ, ịchọrọ ịnọ ya nso oge niile, ị na -anụkwa egwu mgbe ọ na -aga n'ime ụlọ. Ewoo, ị na -akpasu iwe na onye ọ bụla nọ gị nso.
Fidget Spinner Porn bụzi ihe, o doro anya
Enwere ihe karịrị nde 2.5 na -achọ porn na -atụgharị anya, dị ka data nke Pornhub si chịkọta, na -eme ka ọ bụrụ okwu kachasị ewu ewu na Mee.
Ụzọ na-enweghị isi iji mee enyi? Gaa n'ụlọ ahịa kọfị n'elekere asatọ nke ụtụtụ ...
N'izu gara aga, anyị kwurula ụzọ ole na ole esi eme enyi. (Ọ nwere ike isi ike mgbe ị toro!) Ọ dị mma, nke a bụ ụzọ dị mma izute ezigbo ndị enyi ọhụrụ ....
Vibrator a mara mma nke ukwuu dị mma maka ndị mbido BDSM
Igwe ịma jijiji a na -eyi, Lovehoney Butterfly, nwere ihe eji achọ mma ma dịkwa mma maka BDSM. Mana maka orgasms naanị, ikekwe gaa karịa ọdịnala.
Ịchere Mmekọahụ Ọ Na -eme Di na Nwunye Na -enwe Obi Ụtọ?
O siri ike ịmata ihe, kpọmkwem, na -eme ndị mmadụ obi ụtọ, mana mkpakọrịta nwoke na nwaanyị saịtị Match kpebiri inyocha data sitere na nyocha ndị otu iji chọpụta. Ụfọdụ bụ ihe ị ga -atụ anya ya: Dịka ọmụmaatụ, ndị kacha nwee obi ụtọ na -apụkarị ma zere ịchụso ndị enyi ha na mgbasa ozi mmekọrịta. Otu ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya, n'agbanyeghị, pụtara ihe: Ka ndị mmadụ na -eche ka ha nwee mmekọ, ha na -enwekwu obi ụtọ. Dabere na nyocha Match, ndị na -enwe mmekọahụ na ụbọchị nke ise nwere ike inwe 35 pasent karịa ndị na -abanye n'ụra n'ụbọchị mbụ, ndị kacha nwee obi ụtọ na -eche ruo mgbe ha kwere nkwa ọlụlụ. Ọ bụghị naanị nke ahụ, nguzo otu abalị kwa afọ na -ebelata obi ụtọ ụmụ nwanyị site na pasentị iri na anọ ebe ụmụ nwoke na -ebelata pasent 6. Kedu ihe na -eme ebe a? Mmekọahụ nkịtị ọ bụ uzomume nhụsianya? Ndị ọkachamara na -adọ aka na ntị megide ịtụgharị nsonaazụ ndị a dị ka ihe kpatara iji kwụsị inwe mmekọahụ. Vanessa Marin, onye na -ahụ maka mmekọ nwoke na nwanyị kwuru, sị: 'Ndị na -eche ruo mgbe nkwa ọlụlụ ma ọ bụ agbamakwụkwọ iji nwee mmekọahụ nwere ike nwee ezigbo ihe metụtara omume ma ọ bụ okpukpe. 'N'ezie, ha ga -ekwupụta afọ ojuju maka ibi ndụ kwekọrọ na nkwenkwe ha. Nke ahụ bụ nnukwu ihe, mana ọ bụghị mmadụ niile na -ekerịta ndị ahụ
Ị kwesịrị ichegbu onwe gị ma ọ bụrụ na ọ na -edobe foto nke onye bụbu ya? Nnyocha na -ekwu: Um, Eleghi anya!
N'ịgbasa nkewa, anyị ekwuola maka iweghachi ihe ochie niile, na ịkwụsị kọntaktị. Mana akara mmekọrịta gị gara aga-yana nke ya!-agaghị ekwe omume iwepụ kpamkpam. Nke a ọ bụ ihe kpatara nchegbu?
Iji Vibrator na -eme ka ị ghara inwe ike ịkwa akwa n'ụzọ ndị ọzọ?
Ezigbo Emily, ahụrụ m vibrator Ime Anwansi m n'anya n'ezie, mana anụwo m asịrị gbasara vibrators na -eme ka mmịkọ ahụ ghara imebi, ma ugbu a enwere m ụjọ na m na -emebi ohere m nwere inwe mmekọ nwoke na nwanyị. N'ezie, mgbe ọ bụla m laghachiri n'iji aka m, ọ na -ewe ogologo oge ịbịa ebe ahụ. Ọ kwesịrị ka m kwụsị iji igwe jijiji m? Enwere m obi anụrị ịnụ na ị banyela n'ime anwansi, orgasmic ụwa nke ihe egwuregwu ụmụaka! Ịmụta ka ị ga -esi mee onwe gị obi ụtọ nke ọma bụ otu n'ime mkpịsị ugodi maka inwe mmekọahụ na -enye ọ happyụ na ahụike. Mana ugbu a ị chọtala ụzọ a siri ike iji ruo orgasm, ị na -eche, ị ga -enwe ike ịme ya ọzọ na -enweghị onye na -eme mkpọtụ ntụkwasị obi gị? Ka ewu ewu na -ama jijiji na ihe egwuregwu ụmụaka ndị ọzọ na -aga n'ihu na -abawanye, enwere nchegbu na -arịwanye elu na ndị na -ama jijiji nwere ike imebi gị, na -eme ka o sie ike (ma ọ bụ ọbụna agaghị ekwe omume) iru na njedebe na -enweghị enyemaka nke enyi eletrik. Nke mbụ, ị maghị ihe vibrator riri ahụ - ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị na kemịkalụ. Iji ya agaghị eme ka ị ghara inwe ike iji aka eme ihe, mana ọ nwere ike mee ka ọ dị ka ha chọrọ oge na mbọ karịa ma e jiri ya tụnyere ya. Ime Anwansi na -etinyekwa gị
5 Nzuzo Mmekọahụ Tantric M mụtara na Email Goop (Daalụ, Gwyneth!)
Na-agbanwe vibe site na ọdịnaya anaghị eri anụ na-amakarị, Goop mere 180 wee kesaa ezigbo ngosipụta tantra n'izu a. Onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ na onye na -akụzi mmekọrịta nwoke na nwanyị Michaela Boehm nyere ụfọdụ ihe nzuzo - ọ bụghị naanị na ị na -enwe mmekọahụ kamakwa ọ ga -eme ka ọkụ na -adị ndụ n'ozuzu ya - echere m na ndụmọdụ ahụ mara mma nke ukwuu. Ị dịla njikere? Ka anyị maba n'ime ... 1. 'N'ime mmekọrịta a na -ekewasị ekewa (nke pụtara inwe mmekọ nwoke na nwanyị) otu onye mmekọ na -ewepụta okwu nwanyị na otu na -ewepụta okwu nwoke karịa na ọdịiche dị oke iche na nhazi na -eme ka arc ike nke polarity mmekọahụ. Ka 'mkpanaka' na -ekewapụ, otú ahụ ka agụụ mmekọahụ na -esiwanye ike. N'ime mmekọrịta dị ogologo oge, ndị mmekọ na-abụkarị otu ihe-anyị na-amalite inwe mmasị n'otu ihe ahụ, na-eme otu ihe ahụ-ka oge na-aga, di na nwunye ahụ na-emegharị ọnụ karịa na-eme polarizes, yabụ na ha enweghị kemistụ mmekọahụ. ' Mara mma nke ukwuu na -akọwa mmekọrịta ọ bụla ị nwetagoro ebe inwe mmekọahụ siri ike, nri? Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na mgbe ụfọdụ Ọ maghị onye (ma ọ bụ ihe ị ga -atụ anya n'aka ya) nwere ike ime ka ihe bụrụ ihe na -atọ ụtọ karị. O yikwara ka ụzọ ị na -esi enwe mkpali a bụ idobe 'ọrụ' mmegide n'ime ime ụlọ. Ugbu a, tupu ị kwuo nke a
Ntuziaka zuru oke maka ịchọta afọ zuru oke nke nwoke ị kwesịrị ịkpa
Afọ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị ọnụọgụ, mana nke ahụ akwụsịghị ya ịbụ ihe ọtụtụ mmadụ na -atụle mgbe ha na -eme mkpakọrịta na ịchọ onye ga -abịa n'ọdịnihu, ọ dị mma? Ụfọdụ ụmụ nwanyị na -ahọrọ nkịta ọhịa ọlaọcha tozuru okè. Ụfọdụ ụmụnwanyị na -ahọrọ nwa okorobịa ka ọ mee ka ha bụrụ nwata n'obi. Ufodu umunwanyi echebughi echiche banyere ya ruo mgbe ha nwere echiche nke jọrọ njọ nke ukwuu na ha achọghị ịbụ ndị enyi ikpeazụ ha ka ha lụọ na onye mbụ ga -abụ nwanyị di ya nwụrụ, ikekwe ọ ka mma ịmalite ịlụ nwata. dudes ozugbo ka mma ohere ha. (Nwanyị ahụ na-arịa ọrịa bụ m, obvi.) Mana n'ezie, enwere ụzọ kachasị mma iji kwekọọ dabere na afọ? N'ike mmụọ nsọ site n'ọmụmụ ihe ọhụrụ ole na ole na ọtụtụ ndị okenye, ana m achịkọta ndepụta mara mma nke ihe niile ị nwere ike chọọ ịtụle mgbe ị na -edobe Match.com afọ ma ọ bụ mgbe ị na -ekpebi ma ị ga -eso nwoke ahụ mara mma nke na -enweghị '. agụchaala mahadum nke ọma. Dị ka Mariah Carey ma lụọ nwa okorobịa! Ma ọ bụ emela! Amaghị m. Nke a na -aga: Dika onuogugu nke 2012 si dị, ọ na -abụkarị di na nwunye ga -anọ n'ime
Ụzọ 5 dị mfe iji setịpụ onwe gị maka inwe mmekọahụ ka mma
Teknụzụ bụ naanị obere akụkụ nke nnukwu mmekọahụ. Ikekwe ihe dị mkpa karịa ihe niile ị na -emegharị emegharị bụ nkwadebe nke na -eme tupu ị banye n'ime ụlọ.
Ụzọ 5 iji ederede dị ka otu nwoke
Ụmụ nwanyị. Enwere m ndụmọdụ siri ike ma a bịa n'ịde ederede. Mara nke a, dị ka anwụ ga -acha, ikekwe nwoke nrọ gị na -eji ozi ederede dị iche karịa gị. Ọ gaghị ezitere gị ozi dị ka ụzọ izi ozi. Izi ozi, maka nwa nwoke, bụ ụzọ isi nweta ozi ngwa ngwa. Ọ dịghị ihe ọzọ, ọ dịghị ihe na -erughị. Ụbụrụ gị ga -ebuso m agha na nke a, ama m. Mana ruo mgbe ịchọtara nwoke nke na -eche banyere ya ma nwee mmasị na itinye ego na mmekọrịta, ị gaghị ahụ onye ga -ezitere gị ozi n'asụsụ gị. Ụmụ okorobịa na -eji ide ozi dị ka ụzọ izi ozi ha mgbe ha na -achọghị. Ma ọ bụrụ na ha achọghị ịma n'ihu, ọ gaghị aka mma. Naanị ọrụ gị dị ka nwanyị na -alụbeghị nwanyị bụ ịchọta nwoke ahụ chere na ị bụ nrọ ya wee kpebie ma ọ bụ nke gị. Ozugbo ịchọtara nwoke a dị ịtụnanya nke na -eche na ị bụ nwanyị nrọ ya, a na m arịọ gị ka ị mee ya ka ọ dị jụụ. Kpọrọ ihe, dị jụụ! Ọ bụghị n'ụzọ 'enwere m oke ọkụ ka enwere m mmetụta uche', mana karịa na 'ahụrụ m gị n'anya mana ị ka ga na -arụ ọrụ, sweetie pie,' ụzọ. Nke a bụ ntuziaka mgbe ọ
Kedu ka nwanyị ga -esi gwa gị na ị hụrụ ya n'anya?
Ezigbo ndị nwoke n'ụzọ ha na -egosi na ha na -elekọta:
$ 50 & N'okpuru: Akpa Ọmarịcha-Maka Bucks 40!
$ 50 & N'okpuru: Nchọpụta ịchọ mma 9 Swanky
Ndị ama ama na -ele anya dị iche na Bangs
Anemone Canadensis: Na-eto Ikuku Windflower
Ceropegiayere Anyị: Tulite Eriri nke Obi
Nlekọta Nlekọta Ọchịchị
ihe nchacha kacha mma maka akpụkpọ anụ
ihe ị ga -eme n'ụbọchị ezumike
akwa ukwu abụọ nwere akwa ịsa ahụ
onye bụ tessa thompson lụrụ